‘लकडाउन’मा पनि खाली छैनन् कुलमान घिसिङ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/‘लकडाउन’मा पनि खाली छैनन् कुलमान घिसिङ !!
काठमाडौं। वि,द्युत् आ,पूर्ति अति जरुरी सेवाअन्तर्गत भएकाले सबै कर्मचारीलाई बि,दा दिएका छैनौं । कतिपयले कामको प्र,कृति हेरेर घरघरमा बसेर काम गरेका छन् । नो लाइट सर्भिस, सबस्टेसन, पा,वर हाउसमा चौबिसै घण्टा ड्युटी हुन्छ । पा,वर हाउसमा बस्ने प्राविधिक कर्मचारी ‘कम्प्लिट आइसोलेसन’ मा छन् ।कलंकीको स्युचाटारस्थित प्र,णाली सञ्चालन विभागमा वि,द्युत् प्राधिकरणका १२ जना इन्जिनियर क्वारेन्टाइनमा बसेजसरी काम गरिरहेका छन् । जहाँबाट मुलुकभरको वि,द्युत् उत्पादन र खपतको त,थ्यांक आउने गर्छ । अर्थात् सबै नि,यन्त्रण यहींबाट हुन्छ ।
उनीहरू चौबिसै घण्टा त्यहीं बस्छन्। उनीहरूलाई खानेकुरा बाहिरबाट पुर्‍याउने गरिएको छ। उनीहरू बाहिर आउन पाउँदैनन्। बाहिरका कर्मचारी पनि त्यहाँ जान पाउँदैनन्। त्यहाँका प्रमुखलाई पनि भित्र छिराइएको छैन।बिहान उठ्नेबित्तिकै मुकभर वि,द्युत् उत्पादन र खपतको विषयमा उनीहरूसँग जानकारी लिन्छु। सञ्चालित पा,वरहाउसहरूको सञ्चालन कुन अवस्थामा भइरहेको छ जानकारी लिनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। प्राधिकरणका खासखास कार्यालयसँग मुलुकभरको अवस्था जानकारी लिने गरेको छु।
विद्युत् आ,पूर्ति अति जरुरी सेवाअन्तर्गत भएकाले सबै कर्मचारीलाई बि,दा दिएका छैनौं। कतिपयले कामको प्रकृति हेरेर घरघरमा बसेर काम गरेका छन्। सबै जिल्लामा गरेर पाँच सयभन्दा बढी अफिस छन्। नो लाइट सर्भिस, सबस्टेसन, पा,वर हाउसमा चौबिसै घण्टा ड्युटी हुन्छ। पा,वर हाउसमा बस्ने प्राविधिक कर्मचारी ‘कम्प्लिट आइसोलेसन’ मा छन्। पा,वर हाउसमा अरु कोही छिर्न पाउँदैन। भित्रका पनि बाहिर आउन पाउँदैनन्। एउटा पावर हाउसका कर्मचारी को,रोनाबाट सं,क्रमित भए भने अर्को पा,वर हा,उसका मान्छे गएर तत्काल स,म्हाल्ने स्थिति हुँदैन। पावरहाउस धेरै नै सेन्सिटिभ भएकाले स्टाफहरू गेस्टहाउसमा बस्ने र ड्युटीमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। पा,वर हाउसमा पनि बाहिरका स्टाफ भित्र छिर्न पाउँदैनन्।
‘फ्रन्टलाइन’ मा बसेर दैनिक फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी पनि चौबिसै घण्टा ड्युटीमा छन्। उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि सेनिटाइजर, ग्लोब्स, माक्सलगायत सामान्य खालका ब,न्दोबस्ती सामान दिएका छौं। ग्राहकको घरमा मिटर बिग्रेमा, लाइट ट्रिपिङ भएमा, तार चुँडिएमा, ट्रान्सफर्मर फेर्नुपरेमा फ्रन्टलाइनका कर्मचारी खटिने गरेका छन्। उनीहरूलाई जुनसुकै बेला खटिन सक्ने गरी तयारी हालतमा राखेका छौं। उनीहरूलाई काममा प्रोत्साहन गर्न सामान्य अवस्थामा पाउनेबाहेक तलबको ५० प्रतिशत भत्ता थप गरिएको छ। प्राधिकरणको बोर्डले नि,र्णय गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यसो गरेको हो। भोलि सं,क्रमण फैलिने अ,वस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थाका लागि कर्मचारी खटाउन सरकारसँग व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) मा,ग गरेका छौं।
अ,स्पताल, सरकारी कार्यालय वा सं,क्रमितको घरमा छिर्नुपर्‍यो भने कर्मचारीमा आफू पनि सं,क्रमित हुने भय हुन्छ। रो,ग फै,लियो भने पनि बिजुली ब,न्द गर्न त भएन। त्यसका लागि कर्मचारी ‘सेभ’ हुनुपर्छ। फ्रन्टलाइनमा बसेर मुलुकभर तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। भ्यालीमा मात्र १५ वटाभन्दा बढी कार्यालय छन्। राति पनि काम गरिरहेका छौं। अहिले सडक क्षेत्रमा बढी समस्या आउने गरेको छ। व्यक्ति घर, अस्पताल वा कार्यालयहरूमा यस्तो समस्या आयो भने जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। गाह्रोचाहिँ के हो भने चैत–वैशाख हा,वाहुरीले पोल ढाल्ने वा यस्ता कुनै स,मस्या हुन सक्छ, त्यो चु,नौती सामना गर्न भने सबै कर्मचारीको परिचालन जरुरी हुन्छ।
अहिले काठमाडौं भ्यालीमा वि,द्युत् बढी खपत गर्दा ट्रान्सफर्मरले लोड धा,न्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणबाट आएको पाउँछौं। त्यसमा उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामीसँग सात हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर स्टकमा छ। कुनै पनि बेला ट्रान्सफर्मर चाहियो भने तत्कालै उपलब्ध हुन्छ। ओभरलोड हुन थालेको ट्रान्सफर्मर तत्काल फेरेका छौं। अहिले काठमाडौंको लोड हेर्दा बेलुका र बिहानको पिकआवरको खपत एउटै अंकमा देखिएको छ। त्यसबाट सर्वसाधारणले बिजुलीको खपत बढाएको हो कि भन्ने अ,नुमान गर्न सकिन्छ। खाना पकाउन काठमाडौंमा बिजुली प्रयोग भएको देखिन्छ। यसबाट इन्डक्सन चुलो प्रयोग भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। बिस्तारै हिउँ पग्लिन थाल्दा उत्पादन बढ्छ। लकडाउन खुल्दा पनि बिजुली बढी नै हुन्छ। त्यसैले हामीले बिजुली बिक्रीका लागि भारतसँग कुरा गरिरहेका छौं।
सबै आयोजना ठ,प्प छैन वि,द्युत् आयोजनाअन्तर्गत कन्स्ट्रक्सनको फेजमा रहेका प्रोजेक्टको काम सबै लकडाउन भएको छैन। सामान भएसम्म काम नरोक्ने नि,र्णय गरेका छौं। त्रिशूली, तामाकोसी, मध्यभोटेकोसी, सान्जेन र रसुवागढीको काम भइरहेको छ। तामाकोसीमा ५–६ सयभन्दा बढी म,जदुरले काम गरिरहेका छन्। धेरै ठाउँमा स्थानीय तह र प्रशासनको स,हयोग आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता प्रोजेक्टमा काम गर्ने लेबरहरू बाहिर जान पाउँदैनन् र अरु भित्र जान नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। त्यस्ता प्रोजेक्टहरूको सन्दर्भमा कम्तीमा दिनको एकपटक जानकारी लिने गरेको छु। आयोजनाको काम निरन्तर भइरहँदा यसले विद्युत् उत्पादन छिटो गर्न सक्छ।